iOS PayPal API - MYSTERY ZILLION
iOS PayPal API
February 2015 edited February 2015 in iOS Devlopment
iOS PayPal api သုံးတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ။ google မှာ tutorial တွေရှာကြည့်တော့ sample project တစ်ခုတွေ့ပါတယ်။ PayPal account တစ်ခုလည်း ဖွင့်ပြီး အဲဒီ tutorial မှာ စမ်းတာ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
ညီမ testing ယူသုံးထားတဲ့ project က ဒီ link ကပါ။
သူက PayPal account အတွက် static data တွေထည့်ပြီး သုံးထားတာ.. အဲဒါ ကိုပြင်ပြီးတော့ ကိုယ့် PayPal data တွေ ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်တာလည်း မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်.။
အချိန်ရရင် ကြည့်ပေးလို့ရမလားရှင့်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PayPal အတွက် iOS SDK က
Testing အတွက်ဆိုရင် sandbox account နဲ့ စမ်းရပါတယ်။
တကယ့် account အစစ်နဲ့ login ဝင်ပြီး စမ်းဖို့ မလိုပါဘူး။
တကယ်လို့ မရရင် ဘယ်လို မရတာလဲ။ ဘယ်လို error လည်း စသည်ဖြင့် တိတိကျကျ ပြောပြရင် ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုပြီး စဉ်းစားပေးနိုင်မှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကိုတို့ပြောတဲ့ link တွေကနေ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင့်.။
အကိုတို့ပြောတဲ့ iOS SDK tutorial ကနေ Sandbox ကိုရွေးပြီး စမ်းတာ စမ်းလို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
Invalid client credentials ဆိုတဲ့ error ပဲတတ်နေပါတယ်ရှင့်။ Sandbox ကိုရွေးပြီးတော့ စမ်းလို့ကို မရ ဖြစ်နေတာပါ။
ZZAppDelegate file ထဲမှာ YOUR_CLIENT_ID_FOR_SANDBOX ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် email ကို ထည့်ပြီး စမ်းတာလည်း မရပါဘူးဘူး။ တကယ်တော့ ညီမ YOUR_CLIENT_ID_FOR_SANDBOX ဆိုတာကို သေချာမသိပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ့် email ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်တာပါ။
အဲဒါ ဘာလိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ သိရင် ပြောပြပေးပါလားရှင့်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
https://developer.paypal.com/webapps/developer/applications မှာကော register လုပ်ပြီးပြီလား ?
https://developer.paypal.com/webapps/developer/applications/accounts Sandbox account ကော ရှိပြီးပြီလား ?
https://developer.paypal.com/webapps/developer/applications/accounts ကော ဖတ်ပြီးပြီလား မသိဘူး ?
PayPal is successfully done finally. Thank you so much all.